IQela leFraport: Ingeniso kunye nenzuzo eseleyo inyuke kakhulu kwiinyanga ezilithoba zika-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » IQela leFraport: Ingeniso kunye nenzuzo eseleyo inyuke kakhulu kwiinyanga ezilithoba zika-2021
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Yonyuswa kukuchacha okubonakalayo kuhambo lweeholide ngexesha lasehlotyeni, ingeniso inyuke kwikota yesithathu ka-2021 ngeepesenti ezingama-79.5 ukuya kwi-633.8 yezigidi zeedola xa kuthelekiswa ne-€353.1 yezigidi kwikota enye ngo-2020.
Ukubuyiswa kwezithuthi zabakhweli kwinqwelomoya kukhokelela ekukhuleni okunamandla kwengeniso kwiinyanga ezisi-9 zokuqala zika-2021.
Imfuno yokuhamba ngeeholide ngexesha leenyanga zasehlotyeni yayinamandla ngokwentelekiso.
Iziphumo ziye zaphucuka ngenxa yembuyekezo yemali efunyenweyo ngenxa yelahleko enxulumene nobhubhane efunyenwe kwizikhululo zeenqwelomoya zeQela.
Inkampani yesikhululo seenqwelomoya iFraport izuze ukonyuka okubalulekileyo kwingeniso kunye nesiphumo seQela (inzuzo eseleyo) ngekota yesithathu kunye neenyanga ezilithoba zokuqala (ephele ngama-30 kaSeptemba) kunyaka woshishino wama-2021. Izinto ezinegalelo kolu lwando ziquka ukusebenza kakuhle kokusebenza kunye neziphumo ezininzi eziphuma kanye. Izibikezelo zexesha elizayo lasebusika nazo zinethemba. Ngoko ke, Fraport iye yahlaziya imbonakalo yayo yonyaka wonke yengeniso kunye namanye amanani angundoqo emali ukuya phezulu kancinci. Uphuhliso lwezendlela kwisikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt kuqikelelwa ukuba luza kufikelela kwindawo ephezulu yoluhlu lokusebenza olulindelekileyo, phakathi kwabakhweli abangaphantsi kwezigidi ezingama-20 ukuya kwizigidi ezingama-25.
Fraport I-CEO, uGqirha Stefan Schulte, ucacisile: “Emva kwelahleko enkulu efunyenwe ngo-2020 kunye nokwanda kwamatyala, ngoku sibona amathemba aqaqambileyo. Imfuno yokuhamba ngeeholide ngexesha leenyanga zasehlotyeni yayinamandla ngokwentelekiso. Ngaphezu koko, iziphumo zethu ziye zaphucuka ngenxa yembuyekezo yemali efunyenweyo ngenxa yelahleko enxulumene nobhubhane efunyenwe kwizikhululo zeenqwelomoya zeQela. Ngoku, sikwalindele ukuba i-traffic yamazwekazi ibuyele kancinci kancinci- ixhaswa kukuvulwa kwakhona kwemida yase-US. Ngenxa yoko, sinethemba ngakumbi malunga nexesha lobusika kunokuba besinjalo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Nangona kunjalo, kusekude phambili de sifike kumanqanaba abakhweli angaphambi kobhubhani kwaye sikwazi ukunciphisa amatyala ethu kakhulu. ”
Ikota yesithathu: ingeniso kunye nengeniso eseleyo ikhula ngamandla
Yonyuswa kukuchacha okubonakalayo kuhambo lweeholide ngexesha lasehlotyeni, ingeniso inyuke kwikota yesithathu ka-2021 ngeepesenti ezingama-79.5 ukuya kwi-633.8 yezigidi zeedola xa kuthelekiswa ne-€353.1 yezigidi kwikota enye ngo-2020 (omabini amaxabiso ahlengahlengiswe kwi-IFRIC 12 yekhontrakthi enxulumeneyo. ingeniso evela kumanyathelo okwakha nokwandisa kwi Fraport's abancedisi kwihlabathi jikelele). I-EBITDA inyuke yaya kwi-€ 288.6 yezigidi kwikota yesithathu, isuka kwi-minus € 250.3 yezigidi kwi-Q3/2020. Nangona kunjalo, le nzuzo ikwabonisa inani leempembelelo eziphuma kanye: Kwikota yesithathu ka-2020, ingeniso yachaphazeleka kakubi kukwenziwa kwezibonelelo zamanyathelo okunciphisa abasebenzi afikelela kwi-279.5 yezigidi zeerandi. Kulo nyaka, igalelo elincomekayo kwikota yesithathu livela kwimbuyekezo enxulumene ne-COVID kwiinkampani eziphantsi kwethu e-US, Slovenia naseGreece-eye yanyusa "Omnye uMvuzo" weQela malunga ne-30 yezigidi zeedola. Ukulungelelanisa ezi ziphumo ziphela, Fraport isathumela ukukhula okuqinileyo kwe-EBITDA ye-785.6 yeepesenti ukuya kwi-€ 258.6 yezigidi kwikota yesithathu ye-2021, xa kuthelekiswa ne-€ 29.2 yezigidi ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Isiphumo seQela - okanye inzuzo eseleyo - ikhule yaba yi-€ 102.6 yezigidi kwi-Q3/2021 (kubandakanywa nemiphumo ekhankanywe ngasentla), xa kuthelekiswa nokuthabatha i-305.8 yezigidi kwi-Q3/2020.
Iinyanga ezilithoba zokuqala zika-2021: I-Fraport ifumana iziphumo eziqinileyo zokusebenza, ezixhaswa ziziphumo ezihle zodwa
Ngexesha leenyanga ezilithoba zokuqala kulo nyaka, ingeniso yeQela inyuke ngepesenti ze-18.3 unyaka nonyaka ukuya phantse kwi-1.4 yeebhiliyoni zeedola (ngaphandle kweziphumo ze-IFRIC ezili-12). Kunye nokukhula kwabakhweli ngaphandle kweFrankfurt, ingeniso yachatshazelwa kakuhle sisivumelwano ekwafikelelwa kuso kwikota yokuqala ka-2021 phakathi kweFraport kunye neGerman Federal Police (Bundespolizei) yomvuzo weenkonzo zokhuseleko lwenqwelomoya ezibonelelwe nguFraport ngaphambili. Isivumelwano senza ingeniso eyongezelelweyo ye-57.8 yezigidi zeedola. Ezinye iziphumo zokuphela konyaka zinempembelelo entle kwicala lengeniso: Oku kubandakanya imbuyekezo evela kurhulumente waseJamani kunye noweState of Hesse eyanikwa iFraport ngokugcina ukulungela ukusebenza kweSikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt ngexesha lokuvalwa, kunye nembuyekezo yobhubhane kwiinkxaso zeQela eGrisi, i US kunye neSlovenia – ethe yanikela ngee-euro ezingama-275.1 ezigidi kwi-Fraport's "Omnye uMvuzo". Idityaniswe nentlawulo yomvuzo evela kwiPolisa yaseJamani yaseJamani, ezi ziphumo zingaphindi zibe negalelo elipheleleyo le-332.9 yezigidi ze-euro ukuya kwenye ingeniso, kunye nesiphumo esihambelanayo esilungileyo kwisiphumo sokusebenza (EBITDA).
Novemba 10, 2021 kwi-08: 37
KwiBioenergy yethu kunye nelinye ishishini lizuze imivuzo ephezulu kakhulu xa kuthelekiswa nexesha elifanayo. Ndikonwabele kakhulu ukufunda esi sithuba ngokwaneleyo ukuba ndikhangele ukubhala eli nqaku libalaseleyo kunye nesithuba esiluncedo enkosi ngokwabelana.